"Ukunemba okuphezulu" akuhlukaniswa nenjini ye-servo
IServo motor iyinjini elawula ukusebenza kwezakhi zemishini ohlelweni lwe-servo. Kuyinto yedivayisi yokusiza engaqondile engaqondile. I-servo motor ingalawula ijubane, ukunemba kwesimo kunembile kakhulu, kungaguqula isignali yamandla ku-torque nejubane lokushayela into yokulawula. Isivinini se-Servo motor rotor silawulwa yisiginali yokufaka, futhi singaphendula ngokushesha, ohlelweni lokulawula okuzenzakalelayo, njengengxenye yesigungu esiphezulu, futhi sinesikhathi esincane se-electromechanical njalo, umugqa ophakeme, ukuqala kwamandla kagesi nezinye izici, isignali kagesi etholakele ingaba iguqulwe yaba yi-motor shaft ukufuduka kwe-angular noma ukuphuma kwejubane kwe-angular. Ingahlukaniswa ngama-dc servo motors nama-ac servo motors. Izici zayo eziyinhloko ukuthi lapho i-voltage yesiginali ingu-zero, akukho mkhuba wokujikeleza, futhi ijubane liyancipha ngokwanda kwe-torque.
Ama-servo motors asetshenziswa kabanzi ezinhlelweni ezahlukahlukene zokulawula, ezingaguqula isignali yamandla wokufaka kokukhiphayo komshini we-motor shaft bese uhudula izinto ezilawulwayo ukufeza inhloso yokulawula.
Kukhona ama-dc ne-ac servo motors; I-servo motor yokuqala kunazo zonke iyimoto ejwayelekile ye-dc, ekulawuleni ukunemba akuphezulu, ukusetshenziswa kwemoto ejwayelekile ye-dc ukwenza i-servo motor. Imoto yamanje ye-dc servo motor inamandla aphansi e-dc esakhiweni, futhi ukuheha kwayo kulawulwa kakhulu yi-armature nensimu kazibuthe, kepha imvamisa ukulawula i-armature.
Ukwahlukaniswa kwemoto ejikelezayo, i-dc servo motor kuzimpawu zemishini ingahlangabezana nezidingo zohlelo lokulawula, kepha ngenxa yobukhona be-commutator, kunamaphutha amaningi: i-commutator kanye ne-brush phakathi kokulula ukukhiqiza izinhlansi, umsebenzi wokushayisana nomshayeli, awukwazi isetshenziswe esimweni segesi evuthayo; Kukhona ukungqubuzana phakathi kwebhulashi kanye ne-commutator, okuholela endaweni enkulu efile.
Isakhiwo siyinkimbinkimbi futhi ukugcinwa kunzima.
I-Ac servo motor empeleni iyimoto enezigaba ezimbili ezilinganayo, futhi kunezindlela ezintathu zokulawula: ukulawula i-amplitude, isigaba control kanye ne-amplitude control.
Ngokuvamile, i-servo motor idinga ukuthi isivinini semoto silawulwe yisiginali yamandla kagesi; Ijubane lokujikeleza lingashintsha ngokuqhubekayo nokushintsha kwesiginali yamandla. Impendulo yemoto kufanele isheshe, ivolumu kufanele ibe ncane, amandla okulawula kufanele abe mancane. Ama-servo motors asetshenziswa kakhulu ezinhlelweni ezahlukahlukene zokulawula ukunyakaza, ikakhulukazi uhlelo lwe-servo.
I-Generator Rotor Core, Isitaki Sezimoto, Ukuhlanganiswa kweStator Lamination, Rotor Stator, Rotor Stator Wokushaya, Stator Rotor Wokushaya, Yonke Imikhiqizo